တက်မဲ့လှေ | MoeMaKa Burmese News & Media
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာကိုက လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးပြီးသား …
တရားဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူဆိုပြီး
တရားမဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုင်သူတွေအတွက်က လုပ်ခအဆင့်မမှီတဲ့ အနိမ့်ဆုံးလစာနဲ့ 
သူများတွေဆီိမှာ မျက်နှာငယ်စွာ အလုပ်သွားလုပ်ရတယ် ..
အဆင့်မှီတဲ့လုပ်ခဆိုတာ ဘာလဲ …
အဆင့်မမှီတဲ့ အနိမ်ဆုံးလစာဆိုတာကကော …
ဘာမှမသိခဲ့ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး ….။
အလုပ်အကျိုးဆောင် (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသုံးရရင်) ပေးတဲ့သူရဲ့တွက်ချက်ပေးချက်အရ …
မိသားစုစားဝတ်နေရေးစရိတ်လေး လုံလောက်လို့ပါဘဲ …။
အိမ်ရှင်အမျိုးသားကြီးက လေတပ်ကအရာရှိ ..
အိမ်ရှင်အမျိုသမီးကြီးက မင်းမျိုးမင်းနွယ်ထဲကတဲ့ …။
“ငါ့တူမ … ဒါ ညည်း အလုပ်လုပ်ရမဲ့အိမ်လေ …
ညည်းအတွက် အဖော်ရှိတာပေါ့…..
ဘာအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ ညည်းကိုပြပေးလိမ့်မယ် …”
မရောက်ဘူး မတွေ့ မကြုံဘူးတဲ့ မြို့ကြီးပြကြီးနဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ
၁ နှစ် … ၂ နှစ် … ၃ နှစ် ….
အိမ်ကို လွမ်းတတ်ခဲ့ပြီ … အိမ်ကို တမ်းတတတ်ခဲ့ပြီ … ပြန်ချင်ခဲ့ပြီ …
ဒါပေမယ့် မြင်ယောင်လိုက်တဲ့မိသားစုရဲ့ဒုက္ခအဆင်ပြေဘို့ လိုအပ်နေတာမို့
ဒီလိုနဲ့ဘဲ .. အိမ်မပြန်ဖြစ်ခဲ့ ….။
အိမ်ရှင်အမျိုးသားကြီးအတွက် မျက်စိကျစရာ ထိချင်တို့ချင်စရာပေါ့ …။
အခြေအနေမြင့်မားတဲ့သူတယောက်မေတ္တာသက်ဝင်မှုအပေါ် ကျေနပ်မိပါရဲ့ …
ယောကျာ်းသားတယောက်ရဲ့ ပထမဦးထိတွေ့ကြင်နာမှုအပေါ် သာယာမိပါရဲ့ ….
မငြင်းနိုင်ပါဘူး … ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ခံစားမှုအောက်မှာ
ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာ ကျရှုံးခဲ့ရတယ် …။
လူမသိသူမသိပါဘူးဆိုတဲ့တိတ်တခိုးအလုပ်က ကြာရင် လူသိလာတာပါဘဲ
အတူတူအလုပ်ကြတဲ့ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေ …
နောက်ဆုံး အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးဆီကိုပေါ့ …။
အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးကလည်း အိမ်မှာကူညီလုပ်ပေးနေတဲ့အလုပ်သမားနဲ့ ခင်ပွန်းသည်
အဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေပေါ် မကျေနပ်နိုင်တဲ့စိတ် (ဒါကတော့ ဘယ်သူမဆိုပါ)
ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့အိမ်ထောင်ရေး ပျက်ဆီးသွားမှာ လက်မခံနိုင်တဲ့စိတ် …
ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ပြဿနာတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ် …။
“ငါ့ဆွဲကြိုးပျောက်သွားတယ် … နင်ဘဲ..”
ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ဖူးပါရဲ့ … ခုတော့ တကယ်ထိပ်တိုက်ဆိုင်နေရပြီ
ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်မယ် … စံပြအဖြစ်နဲ့ အလုပ်သမားအားလုံးရဲ့အရှေ့မှာ
ရိုက်နှက်တယ် … မေးတယ် …
“ကျမ ဆွဲကြိုးမယူရပါဘူး ..”
လောဘ .. မောဟ .. ဒေါသ .. ဆိုတဲ့ အမျိုးအဆွေတွေလွှတ်ထားပေးရင်
လွှတ်ထားသလောက်သွားတယ် … ယုံလား .လူသတ်ဖို့တောင်ဝန်မလေးတော့ပါဘူး …
ကြောက်လိုက်တာ … တုန်လာတဲ့ထိကြောက်တယ် …
“ကျမ ဆွဲကြိုးမယူရပါဘူး …”
ကြောက်လွန်းလို့ ဆွံ့အသွားတဲ့ထိပါလား ….
ငြင်းဆန်နေတဲ့စကားတွေ အသံတစ်ခုအဖြစ်ထွက်မလာတော့ပါလား …
ကူပါ ကယ်ပါလို့ အိမ်ရှင်အမျိုးသားကြီးဆီ အသနားခံတဲ့အကြည့်နဲ့ 
အားကိုးတကြီး လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ် ….။
ငါသိတယ်… ဒီကောင်မလေး ဆွဲကြိုးမယူပါဘူးဆိုတာ
..သူမယူပါဘူးလို့ သူ့ဘက်ငါရပ်တည်ပေးလိုက်ရင် ……
တစ်စစီဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ငါ့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး …
ပြီးတော့….
လူတွေရှေ့က ငါ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ….
ငါ တရားဝင်ကာကွယ်ခွင့်မရှိ … ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူကမှန်တယ် … မှားတယ်ဆိုတာ
ငါမပါ … ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ .. ကျောခိုင်းလှည့်ထွက်သွားလိုက်တယ် …။
အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်းက မြင်နေရတဲ့အဖြစ်အပျက် မကြည့်ရက်တော့တဲ့အဆုံး
အကူအညီရနိုင်မဲ့အသိတစ်ယောက်ဆီကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ် …
အဲဒီတစ်ယောက်ကနေတစ်ဆင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုကူညီတဲ့အဖွဲ့ဆီကို လှမ်းအကြောင်းကြားတယ် …
အဖွဲ့ အစည်းအနေနဲ့ …. သူများနိုင်ငံမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင်အာဏာမရှိပြန်တော့
ဒေသဝန်းကျင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဆေးရုံပို့ပေးလိုက်တယ် …။
ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်က သတိမရတချက်ရတချက်နဲ့ …
အရေပြားတစ်ခုလုံး မီးလောင်ရာတွေချည်းဘဲ …။
ဆေးရုံမှာ အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေးကူသမှုခံယူမှုကြောင့်လား
သိစိတ် … မသိစိတ်ထဲက စွဲလန်းနေတာတစ်ခုဘဲရှိတယ်
ငါ … ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာ … အရိုက်ခံရတာ
ဘယ်လိုဘဲမေးမေး အဖြေကတစ်ခုထဲ …
နောက်ဆုံးခန္ဓာထဲက ဝိဉာာဉ်ထွက်သွားတဲ့အထိ “ကျမ ဆွဲကြိုးမယူရပါဘူး …”